Ghana: Ady hevitra, fientanana ary fanantenana amin’ny fitsidihan’i Obama · Global Voices teny Malagasy
Ghana: Ady hevitra, fientanana ary fanantenana amin'ny fitsidihan'i Obama
Voadika ny 10 Jona 2009 8:02 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, Français, English
Enim-bolana monja taorian'ny fanovana ny fitantanana tao Ghana tamin'ny alalan'ny fifidianana natao tamim-pilaminana ny volana desambra 2008, ary tahaka ny hoe fifanandrifian-javatra fa enim-bolana aty aorian'ny fanovana nankalazaina tamin'ny haino aman-jery tany Etazonia, dia hitsidika an'i Ghana mandritra ny 2 andro ny filohan'i Etazonia Barack Obama amin'ny fiandohan'ny volana jolay ho avy izao mandritra ny fitsidihana voalohany hotanterahany any Afrika Atsimon'i Sahara hatramin'ny nahavoafidy azy.
Nampientana ny mponina rehetra tsy an-kanavaka any Ghana ny fanambarana ity fitsidihana ity tamin'ny volana may lasa teo. Hatramin'ny mpivarotra madinika ka hatramin'ny tanora manam-pahaizana any an-drenivohitra, hatramin'ireo solombavam-bahoaka voafidy vao haingana dia tsy manana resaka afa-tsy izay ihany. Mitantara an'i Mr. Henry Boahene avy any Accra ny sita All Africa,
Tsy hiasa aho amin'izay faran'ny herinandro izay. Hataoko izay rehetra azoko hatao hiarahako amin'ireo vahoaka betsaka hitsena azy amin'io fotoana io – amiko, izay dia hahafa-po ahy.
Fa manerana ny kaontinanta dia maro ireo mametram-panontaniana: “Fa nahoana no i Ghana?” Milaza ny mpandinika maro fa ny safidy hitsidika an'i Ghana voalohany dia fanekena ireo fifidianana notanterahana tamim-pilaminana tany amin'io firenena io, ary mihevitra koa i Etazonia fa ny filaminana sy ny demokrasia no ambony indrindra eo amin'ny fototra mahaolona sy ny tanjaky ny firenena.
Nanoratra ao amin'ny bilaogy nosoratany avy any Atlanta ilay mpitoraka biloagy nizeriana Farooq Kperogi:
Ireo mpandinika sy mpanao politika amerikana sy ny sandan'ny fitsidihana ataon'ny filoham-pirenena dia maneho fa ny fifidianana an'i Ghana hotsidihan'i Obama voalohany any Afrika mainty dia mety ho fanamafisana ny fafandraisana amin'ity kaontinanta ity, izay tokony mbola hamaritany politika mazava tsara.
Ho faritana io, hoy izy ireo, amin'ny alalan'ny fankatoavana ny politikan'ireo firenena izay tsapa fa nanao ezaka goavana hampanjakana ny demokrasia sy fitantanana tsara – sy ny fanombohan'ny vanim-potoan'ny “fitiavana sarotra” miaraka amin'ireo firenena toa an'i Nigeria sy Kenya, izay manimba ny fahaiza-manaony amin'ny firobohana lalina amin'ny kolikoly sy ny fomba fitantanana tsy azo antoka.
Mamerina izay voalazan'ny Maison Blache koa izy tao amin'ny fanambarana nataony izay manamafy ny voalazan'ireo mpanehohevitra:
Mitady hanamafy ny fifandraisana misy eo amin'i Etazonia sy ny firenena anakiray any Afrika Atsimon'i Sahara mendrika itokisana ny filoha Obama sy Ramatoa vadiny, ary notsipihany fa ny fahaiza-mitantana sy ny fiarahamonim-pirenena dia afaka mandray toerana lehibe eo amin'ny fitadiavana izay ho fandrosoana maharitra, hoy ny fanambaran'ny mpanao gazetin'ny Maison Blanche.
Tsy mahagaga, manamafy izany ny mpandinika sasany, fa horesahana any ny solintany izay hita vao haingana tany Ghana. Manontany i Amedor ao amin'ny bilaogy All Voices,
Fitsidihana ara-pirahalahina ve izy ity sa tombotsoan'i Etazonia noho ireo solintany vao hita?
na dia ny ambany indrindra eran-tany aza, 600 tapitrisa barila, dia tsy hanomboka ny famokarana raha tsy amin'ny taona 2010 ary hihoatra ny 1 lavitrisa dolara ny vola hiditra amin'i Ghana isan-taona.
Manontany ny manam-pijery miabo tahaka an'i Elizabeth Dickinson,
Tsy aleo ve mividy solintany any amin'ny firenena manana tantara tsara eo amin'ny lafiny fanajana ny zon'olombelona, ny fitantanana sy ny lafiny ekonomika? Misy fahasamihafana be eo amin'ny mpamatsy solintany an'i Etazonia fahatelo goavana indrindra dia i Nigeria eo akaiky eo izany. Mazava ho azy fa misy tahotra ihany eo amin'i Ghana fa sao sanatria hitovy amin'i Nigeria eo izy, sao dia hanjary firenena mpanangona risitorina eo fotsiny izy, kanefa hita fa tapa-kevitra hiala amin'izay i Ghana. Ary mety ho resahana mandritra ny fitsidihana izany.
Milaza ny teny nataon'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny any Ghana ny sita All Africa:
Aleo miomana fa mety hanontany an'izay ny filoha. Ndeha hojerena vetivety izay hita ao amin'ny Corruption Perceptions Index mamoaka isan-taona ny Transparency International, izay milaza fa misy fifandraisana ny kolikoly, ny fifandirana sy ireo firenena andalam-pandrosoana tahaka an'i Tchad, Soudan, Nigeria ary Angola.
Arosontsika ny hevitra fa tokony hanova ny fifanarahana sy ny lalakombana hahazoantsika tombony ny rafitra eran-tany, hahazoantsika manomboka fa tsy hangataka lava izao:
Afaka mandresy lahatra tsara ireo rafitra ireo i Etazonia araka ny fahafantaran'ny ministera azy. Varotra sa fanampiana? Ahoana no fomba hahafahana manatsara ny fiainan'ny Ganeana tsotra iray amin'ny alalan'ny fifanarahana eo amin'ny 2 tonta – Ganeana tsotra izay miaina amin'ny karama latsaky ny 2 dolara isan'andro – ny fotoana ihany no afaka hilaza izany. Filaminana sy fitantanana tsara – aloha sy aorian'ny fivoahan'ny solintany – dia ampy na iza na iza no hividy azy.